भ्रष्टाचारको चिरफारको पुस्तक «
‘पुस्तक किन पढिन्छ ?’ कुनै पनि विषयवस्तुमा ज्ञान हासिल गर्न, विषयवस्तुको सार बुझ्न र आफूले खोजेका प्रश्नहरूको जवाफ पाउनको लागि । पुस्तक पढ्दै गर्दा लेखकले कुन विषयलाई कस्तो तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ ? त्यस विषयमा उसको पकड कस्तो रहेछ र आफ्नो लेखनशैलीको मद्दतले उसले पाठकलाई त्यसको भाव बुझाउन सक्यो वा सकेन, त्यो महत्वपूर्ण रहन्छ । लेखक शरदचन्द्र पौडेलले ‘भ्रष्टाचार कारण, परिणाम र नियन्त्रणका उपाय’ पुस्तक लेख्दै छन् भन्ने थाहा पाउँदा बजारमा निकै चासो थियो । लामो समय सरकारी सेवामा रहेका लेखकले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयलाई कसरी पस्कन्छन् भन्ने उत्सुकताले गर्दा पनि होला, पुस्तकको प्रतिक्षा थियो, बजारमा ।
एउटा पाठक भएर पुस्तकको अध्ययन गर्दा पुस्तक तथ्यगत र भावनात्मक हिसाबले लेखिएको महसुस हुने उनको पुस्तक बढो रोचक छ । पाठकले अनुमान लगाएभन्दा बाहिरका कतिपय विषयवस्तुहरू पनि भेट्नेछन् । ‘उपहार, दान, बकस’ नियतवश फरक हुन सक्छन् । कसैलाई प्रभावमा पार्नका लागि पनि उपहार, दान र बकसको प्रयोग गरिएको हुन सक्छ । लेखकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्लेषण बुझाइ र प्रस्तुति बडो रोचक लाग्यो । साँच्चिकै भन्ने हो भने यो पुस्तक न्याय र कानुनका क्षेत्रमा कार्यरत जोकोहीले पनि पढ्न जरुरी छ । त्यसैगरी प्रशासन क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलगायत राजनीतिक शिखर व्यक्तिहरूले पनि यो पुस्तक अध्ययन गर्न र बुझ्न उत्तिकै महत्व राख्छ ।
भ्रष्टाचार के हो ? कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्ने धेरै विषयलाई पुस्तकले समेटेको छ । सार्वजनिक दायित्वमा रहेका राजनीतिक, सरकारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले समाजप्रदत्त अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग गरेर कसरी भ्रष्टाचार गर्छन् ? त्यसमा व्यापारी तथा स्वार्थ समूहको कस्तो हात रहन्छ ? भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न सर्वसाधारणको भूमिका कस्तो हुन्छ लगायतका विविध विषयलाई समेटेर यो पुस्तक तयार पारिएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा कस्तो प्रक्रियालाई प्रभावमा पार्न कस्तो वस्तु र क्रिया हुन्छ । जस्तै, न्यायमूर्तिको सवालमा होस् वा अदालतमा वा जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सवालमा । उसलाई प्रभावमा पार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तेस्रो व्यक्तिको हातबाट कसरी लेनादेना गरिन्छ ? त्यस्तै जमिनका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दा जमिन नै उपहार लिनु, खानु र काम गरिदिनुजस्ता कुराहरू कसरी गरिन्छ भन्नेसम्मका विषयलाई लेखकले जोडदार रूपमा पुस्तकमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।
तर, एनजीओ आईएनजीओ, गैरसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रसम्म पुगेर अनियमितता र भ्रष्टाचारको विश्लेषण गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रले पुँजी घटाएर गर्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुरा पुस्तकले उल्लेख गर्न भ्याएको छैन । तर, लेखकले स्रोत र तथ्य बिब्लियोग्राफीमा समेटेर विश्लेषण र तथ्यगत कुराहरूलाई जसरी प्रकाशन गरे, त्यसलाई सामान्य कुरा मान्न सकिँदैन । उनको साहस र हिम्मतलाई कदर गर्नुपर्छ ।
जम्मा ७ सय ६६ पृष्ठको यस पुस्तकमा यति धेरै कुरा समेटिएको छ, त्यसको विश्लेषण, अध्ययन र त्यसका समग्र कुरालाई समेटेर पुस्तक समीक्षा लेख्न लामै हुन्छ । तर प्रशासन क्षेत्रमा रहँदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भीक भएर लोभलालचलाई अस्वीकार गर्दै इमानदारपूर्वक काम गरेका लेखकले पुस्तकमा जुन विषय उठान गरेका छन्, त्यो आफैंमा साहसी काम हो ।
अस्वाभाविक रूपमा चाँदी आयात भएर मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी
मेलम्ची आयोजना मर्मतको काम पुरानै ठेकेदारलाई दिने तयारी सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम द्रुत
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कार्यक्षमता र कार्यदक्षताको अभावले अबण्डा बजेट राख्ने, आवधिक योजना नबनाउने, मध्यावधि खर्च
शनिबार बिहान काठमाडौंको भिजिविलिटी कम हुँदा हवाई उडान तथा अवतरण प्रभावित भएको छ । मौसममा